Arbor Day: ဝိသေသနှင့် အရေးပါမှု | Green Renewables များ
ဂျာမန် Portillo | 08/12/2021 10:00 | ပတ်ဝန်းကျင်
သစ်ပင်များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသက်အကြီးဆုံး နေထိုင်သူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် တာဝန်ရှိသောကြောင့် လေထုအတွင်း ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ဟိ သစ်ပင်နေ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် သက်ရှိများဆက်လက်တည်ရှိနေစေရန်အတွက် သစ်တောဧရိယာများကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပေးသည်။
ထို့ကြောင့် Arbor Day နှင့် ၎င်း၏ အရေးပါပုံတို့ကို သိလိုသမျှကို ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြသွားပါမည်။
1 ဘာကြောင့် Arbor Day ရှိတာလဲ။
2 သစ်တောသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို မည်မျှစုပ်ယူနိုင်သနည်း။
3 ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မဟာမိတ်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Arbor Day
4 သစ်ပင်စိုက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း
ဘာကြောင့် Arbor Day ရှိတာလဲ။
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သစ်တောများနေ့ မှ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ကို ခွဲခြားထားရပါမည်။ အခြားရက်စွဲတစ်ခုသည် မျိုးစိတ်များရှင်သန်မှုသေချာစေရန် သစ်တောဧရိယာများကို လူသားများ သတိပြုမိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သစ်ပင်နှင့် သစ်တောများ၏တန်ဖိုးကို အလေးပေးဖော်ပြခြင်းနှင့် အနီးကပ်ဆက်စပ်နေပါသည်။
သစ်ပင်များသည် သဘာဝ သံသရာတွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ရှိသည်။ အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် မြေကြီးပေါ်တွင် နေထိုင်သော သတ္တဝါများ၏ ရှင်သန်မှုအတွက် အခြေခံဖြစ်သော သစ်ပင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်မျိုးစိတ် ထောင်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ရာ ပြီးပြည့်စုံသော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် သစ်ပင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရေကြီးရေလျှံမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးကာ ဇလဗေဒလည်ပတ်မှုကို ထိန်းညှိပေးကာ ဆေးဝါးနှင့် အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လူသားတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အပျိုစင်သစ်တောများ၏ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကျန် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ သစ်ခုတ်မှုဒဏ်ကို ခံခဲ့ရသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်များ ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပြီး လေထုထဲသို့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်လွှတ်ရုံသာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ဇီဝမျိုးကွဲများကိုပါ ထိခိုက်စေသည့်အပြင် မျိုးစိတ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။
ဤအခြေအနေကြောင့် ဂေဟစနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဆယ်စုနှစ်ကို 2021 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ပြန်လည်ပြောင်းလဲ၍မရသော သဘာဝယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို တားဆီးရန်အတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Arbor Day ရှိလျှင် ဒီအခြေအနေကို ရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးကို သေချာအောင် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဆွီဒင်သည် ဤအားလပ်ရက်ကို ကျင်းပသည့် ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု လျော့ပါးစေရန်၊ မြေဆီလွှာကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေရန် သစ်ပင်များ ပါ၀င်သော အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍကို သတိပြုမိစေရန် 1840 ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သစ်တောသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို မည်မျှစုပ်ယူနိုင်သနည်း။
သစ်တောမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို မည်မျှစုပ်ယူသည်ကို သိရှိရန် ၎င်းတို့တွင် မည်သည့်သစ်ပင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို ဦးစွာ ဆန်းစစ်ရပါမည်။ Seville တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတစ်ဦးမှ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် အလက်ပိုထင်းရှူးသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို စုပ်ယူမှုအများဆုံး သစ်ပင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ရင့်ကျက်သော Aleppo ထင်းရှူးများသည် တစ်နှစ်လျှင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တန်ချိန် ၅၀ အထိ စုပ်ယူနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။.
တစ်နည်းဆိုရသော် ဤမျိုးစိတ်များ၏ ရင့်ကျက်သောနမူနာသည် တစ်နှစ်လျှင် ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀ သွားလာနိုင်သော အလတ်စားယာဉ် ၃၀ မှ ထုတ်လွှတ်သော ဓာတ်ငွေ့များကို စုပ်ယူနိုင်သည်။ Iberian ကျွန်းဆွယ်သည် ဤသစ်ပင်များကြီးထွားမှုအတွက် စံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ထင်းရှူးတောများသည် သဘာဝကာဗွန်စုပ်ယူနိုင်သည့် ကြီးမားသောအလားအလာရှိသည်။
ကြွယ်ဝသော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကြောင့်၊ CO2 အများအပြားစုပ်ခွက်များသည် အပျိုစင်သစ်တောများဖြစ်သည်။. လူသားတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ထင်ရှားစွာ သက်သေမပြနိုင်သော ပကတိအတိုင်း၊ ရှေးဦးနှင့် ဇာတိမျိုးစိတ်များရှိသော သစ်တော သစ်တောဖြစ်ပြီး၊ ဂေဟဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်သည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။ လူသားတို့၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့် ဤအပျိုစင်သစ်တောများနှင့် ရာသီဥတု ထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ လျော့ကျသွားခဲ့သည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မဟာမိတ်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Arbor Day
အရှေ့တောင် အာရှ တောနက်
မြောက်အမေရိကနှင့် ကနေဒါတို့၏ မူလသစ်တောများ
Siberian taiga ၏သစ်တောများ
သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ပင်၊ သစ်တောများကို ကာကွယ်ခြင်းသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို စုပ်ယူသိမ်းဆည်းရန် အပြင်းထန်ဆုံးနည်းလမ်းကို ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့စွမ်းရည်က ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။ သစ်ပင်တစ်ပင်သည် တစ်နှစ်လျှင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပျမ်းမျှ 22 ကီလိုဂရမ် သိုလှောင်ထားသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ မိုးသစ်တောသည် သစ်ပင်တစ်ပင်တည်းတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တန်ချိန် ၂၅၀ ဘီလီယံကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု နှစ် 90 နှင့် ညီမျှသည်။ ဥရောပသစ်တောများသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု စုစုပေါင်း၏ 10% ခန့်ကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားသည်။ စပိန်တွင် သစ်တောများသည် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ဟက်တာ ကာဗွန်တန်ချိန်ကို ပြုပြင်ပေးသည်။
သို့သော် ယခုလေ့လာမှုများစွာအရ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြားပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်သော အပြုအမူများကို မပြောင်းလဲပါက၊ သစ်ပင်တွေရဲ့ သဘာဝစွမ်းရည်ကို နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာမိတ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူတစ်ဦးထံ သင်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သစ်တောပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို တားဆီးရန်နှင့် တရားမဝင်သစ်ခုတ်လှဲမှု အဆုံးသတ်ရေးတို့ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။
သစ်ပင်များသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
၎င်းတို့သည် အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2) ကို ဇီဝလောင်စာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒါကြောင့် ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
၎င်းတို့သည် ဇလဗေဒ လည်ပတ်မှုအား ထိန်းကျောင်းသူများဖြစ်ပြီး ရေကြီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
၎င်းတို့သည် မြေဆီလွှာတိုက်စားခြင်းကို တားဆီးပြီး စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လိုလားသည်။
၎င်းတို့သည် အပင်များ၊ ငှက်များ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ တွားသွားသတ္တဝါများနှင့် ကုန်းနေရေနေရေနေသတ္တဝါများ၏ နေထိုင်ရာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
တောတွင်းဧရိယာများတွင် ၎င်းတို့သည် စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းတို့သည် ရာသီဥတုကို ထိန်းညှိပေးကာ အဓိကအားဖြင့် လူသားများကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။
၎င်းတို့သည် ဆေးဝါးများ၊ အစားအစာ၊ စက္ကူ၊ လောင်စာများ (သစ်သားနှင့် ကျောက်မီးသွေး)၊ အမျှင်များနှင့် အခြားသဘာဝပစ္စည်းများ (ဥပမာ ဖော့၊ အစေးနှင့် ရာဘာ) များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။
သစ်ပင်များ၏ စူးစမ်းလိုစိတ်အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက (Journal of Sustainable Forestry မှထုတ်ဝေသော) လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်တွင် သစ်ပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း 60,065 ရှိပါသည်။
မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်၍ ဌ၊သစ်ပင်များသည် အသက် 40 သို့မဟုတ် 50 နှစ်များရောက်သောအခါတွင် အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
အေးသောဒေသ သို့မဟုတ် ဒေသများတွင် ကြွက်နှင့် ငှက်များကို မွေးမြူကြသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကညာသစ်တောများ၏ 78% ဝန်းကျင်ကို လူသားများက ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ကျန် 22% မှာ သစ်ခုတ်မှုဒဏ်ကို ခံခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘာ့သစ်တောများ၏ 12% ကို ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ကာကွယ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။
သစ်တောသည် ဤဒြပ်စင်၏ ၂၈၉ ဂစ်ဂါတန်ခန့် စုဆောင်းထားသော အရေးကြီးသော ကာဗွန်အရန်အရံတစ်ခုအဖြစ် ခန့်မှန်းထားသည်။
အန္တာတိကနှင့် ဂရင်းလန်းမှလွဲ၍ ၎င်းတို့သည် မြေကြီးအကျယ်အဝန်းကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး မြေကြီး၏ 28,5% ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့သစ်တောများ၏ ထက်ဝက်သည် အပူပိုင်းဒေသများဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်မှာ အပူပိုင်းနှင့် ပေါက်ရောက်သော ဒေသများဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် Arbor Day အကြောင်းနှင့် ၎င်း၏ အရေးပါပုံကို သင်ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » သစ်ပင်နေ့
လေအပူရှိန် အောက်ကြမ်းပြင် အပူပေးခြင်း